Nnu nnu di mma ma di nma
Otu n'ime oge kachasị mma nke nri nke ndị dị iche iche nke ụwa dum bụ na ọ ga-abụ nnu nnu, nke a na-agbakwụnye, ma n'oge nkwadebe nke efere nri, na tupu ịje ozi. Ọ gaghị abụ ihe na-enweghị atụ ịchọta na na omenala India, nnu nchara bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi, eziokwu ahụ, ọ bụghị nanị mma, ma mgbe ụfọdụ ọ na-emerụ ahụ ahụ.
Uru nke nri nwa ojii nnu
Ụdị nnu a bụ obere kalori ngwaahịa. Ya mere, maka 100 g enwere 0.2 kcal. Ọzọkwa, na ngwakọta ihe oriri nke nnu nnu ọ dịghị ndị na-edozi ahụ, enweghị carbohydrates, enweghị abụba. N'otu oge ahụ, ọ na-ekwusi ike kachasị pH nke ọbara ahụ, na-eme ka nchebe ahụ ghara ịnweta, mezi mgbaze, dịka aka, na-ebelata ahụ mgbu, mgbagwoju anya, spasms.
Ngwakọta nke nnu nnu gụnyere ihe ndị bara uru dị ka:
manganese, nke na - enyere aka nchịkọta nri, nakwa dị ka ọrụ nke usoro nhụjuanya nke etiti;
calcium, nke na-enyere aka na-amụmụ ọnụ ọchị na-acha uhie uhie ruo ogologo oge, ezé ezé, na-egbochi ọgba aghara obi, ma bụrụ ihe ngwọta dị mma nke nkwarụ;
iodine na-ere abụba na-enweghị isi, na-eme ka ọkpụkpụ ya zuru okè;
magnesium ọgụ na ntinye nke nkume na gallbladder na akụrụ, na dị oké mkpa maka afọ iri;
zinc na-agbazi akpụkpọ anụ ma na-eche maka ichebe anụ ahụ na-eto eto, ọ bụghị ikwe ka ọ daa;
Potassium na-egbochi ehighi ụra, ọbara mgbali elu na afọ ntachi.
Na ndepụta a nke uru bara uru nke nnu nchara adịghị agwụ agwụ. Maka ndị gbalịrị ụzọ nile ị ga-esi wepụ dandruff ma ọ bụ chọọ ịlaghachi na mkpọchi ha dị ka ihe dị oké ọnụ ahịa, enwere ozi ọma: nnu a na ihe ọṅụṅụ tomato mgbe izu ole na ole gasịrị ga-enyere aka nweta ihe a chọrọ.
Ọ bụrụ na isi ihe mgbaàmà nke nsogbu iri nri dị ugbu a, nnu ojii ga-abịa napụta. Ke adianade do, ọ na-asachapụ ahụ nke toxins, ihe ọjọọ. A na-atụ aro ịnye ndị mmadụ nri gị, ahụhụ site na ọhụụ dara ogbenye, ọnọdụ ịda mbà n'obi, flatulence .
Otu uru dị mkpa karịa tebụl na-eri anụ bụ na obere sodium dị na nnu nnu. Nke a na-egosi na ọ dịghị egbu oge na nkwonkwo.
Nakwa uru nke nnu nchịkwa India bụ na ọ na-eme ka ọbara dị ọcha, ọ naghị ejide mmiri n'ime akụrụ ma nwee ike ịmegharị ahụ n'ahụ.
Mgbu nke nnu nnu
A gaghị atụ aro ka iji ihe karịrị 25 g ngwaahịa a kwa ụbọchị. Ma ọ bụghị ya, ọbara mgbali elu nwere ike ịbawanye ma ọ ga-enwe ike ịda mbà n'obi.
Kedu ka esi na-eku ume mgbe ị na-agba ọsọ?
Chili - nsogbu na uru
Na-agba ọsọ na-ebu ibu na ụkwụ
Ryazhenka - ọdịnaya calorie
Kedu ka esi eme ka oatmeal ghara ibu ibu?
Kedu vitamin ndị dị na persimmon?
Kedu uru bara acid ascorbic dị na ebe ọ dị?
Mmiri mmanụ aṅụ - uru bara uru
Kedu ihe magnesium nwere?
Kedu otu esi ewere bran maka oke nfe?
Ebony jam - ọma na ihe ọjọọ
Nri oriri - tupu na mgbe
Ugu - uru bara uru na contraindications
Marinade na mmanya maka shish kebab
Esi si scars na scars
Enwere ike igbanye osisi n'oge ị na-ara ara?
Wit - akwụkwọ na omume maka mmepe nke ndị amo
17 Ezi ntụziaka maka ọgwụ ụtọ na ọrịa na-atọ ụtọ
Na-akwadebe ala maka oyi
Nri na Chinese - Ezi ntụziaka maka nri na-atọ ụtọ ma dị ụtọ
Ime ime nnu
Kedu ka esi weghachite akwa ochie?
Grassstone - ngwa
Ihe ịrịba ama na Evdokia na March 14 - akụkọ ihe mere eme nke ezumike, ọdịnala ndị mmadụ, ememe
Nwee ihe mgbochi
Ọnụ ụzọ si MDF
Uwe ejiji na oche na paseeji
Mbadamba ụrọ si sinusitis
Uru nke kabeeji maka ahụ ike - ihe niile ị chọrọ ịma gbasara kabeeji ọcha na ụmụnne ya
Mkpuru ewu willow osisi ma ọ bụ osisi shrub?